Ithala leencwadi Igumbi lokulala 1st umgangatho wendlu - I-Airbnb
Ithala leencwadi Igumbi lokulala 1st umgangatho wendlu
Igumbi likumgangatho wokuqala kwindlu enemigangatho emine kwimizuzu emihlanu ukusuka kwisikhululo saseBrighton. Ibekwe kwindawo esembindini kwaye izolile. Igumbi leshawari likumgangatho omnye kunye nesinki kunye ne-WC kwaye kwabelwana ngayo nezinye iindwendwe.
Indlu yam ibekwe kwindawo efanelekileyo, kufutshane nombindi wesixeko kodwa ikwisitrato esithe cwaka.
Iindwendwe zinokufikelela kwigumbi lokuhlambela, i-wc kunye nesinki kwaye zisebenzise ngokupheleleyo ikhitshi ukulungiselela ukutya kunye nokwenza isiselo esishushu. Iindwendwe zinokusebenzisa itafile yegumbi lokutyela kumsebenzi welaptop kunye nokubamba ii-imeyile.
Ndonwabile kakhulu ukwabelana ngolwazi lwam lommandla wendawo, iindawo kunye neziganeko. Kwakhona ndiyayihlonipha imfihlo yeendwendwe ezifuna nje ukusebenzisa ikhaya lam njengesiseko.
Indlu yam isembindini weBrighton. Yonke into ikwimizuzu elishumi yokuhamba, kodwa indlela ithandeka kwaye izolile, njengoko zimbini iindlela ukusuka kwindlela enkulu.
Imizuzu emihlanu uhamba ngeenyawo ukusuka kwisikhululo saseBrighton kunye nemizuzu emithathu kude kwiindlela ezinkulu zebhasi.
4.95 out of 5 stars from 824 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-824
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi824
Izimvo eziyi-2 474